Wararka - Wararka Gaoji ee usbuuca 20210126
Tan iyo markii aan helnay fasaxii Guga Shiinaha ee Fasaxa Febraayo, shaqada waax kasta waxay noqotay mid ka xasilloon sidii hore.
1. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan dhammeynay in ka badan 70 amarada iibsiga.
54 cutub oo ah mashiinka wax lagu farsameeyo ee loo yaqaan 'multifunction busbar' noocyo kala duwan;
7 unug oo mashiinka foorarsiga adeegga;
4 cutub oo ah mashiinka lagu shiidayo basbar bar
8 cutub oo busbar feer ah iyo mashiinka xiirista.
2. Lix cutub oo ah xariijinta basaska ODM ayaa bilaabaya howsha isku imaatinka. Khadadkaan basaska lagu baaro waxaa dalbaday macaamiil kala duwan oo ka kala yimid Hebei iyo gobolka Zhejiang. Qeybo ka mid ah cutubyadan ayaa loo beddelay si loo buuxiyo shuruudo kala duwan oo ku saabsan waxqabadka qalabka, xulashada qalabka, iyo qaabeynta muuqaalka iyada oo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
3. Xafiiska Cilmi baarista iyo Horumarinta ee shirkadda Shandong Gaoji wuxuu horumar ka sameeyaa qalabka cusub ee qalabka wax lagu beddelo, qalabka isku-dhafka ee khadka tooska ah ee baarkinka si otomaatig ah ayuu tallaabo ugu qaadayaa heer tijaabo cusub
4. Marka la gaaro Janaayo 22-keed, xaaladda faafida awgeed, amarka INT wuxuu yareynayaa qiyaastii 30% marka la barbar dhigo isla sanadkii hore. Dhinaca kale, ka faa'iideysiga qorshaha dib-u-soo-kabashada warshadaha ee dowladda, amarka gudaha ayaa sii kordhaya tan iyo Juun 2020, iibku waa loo siman yahay sanadkii hore.